७७ कि ७५ जिल्ला ? संविधानमै अस्पष्ट – Everest Dainik – News from Nepal
७७ कि ७५ जिल्ला ? संविधानमै अस्पष्ट
काठमाडौं ,साउन ११ । सरकारले २१ दिनको समय दिएर गठन भएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम सुरु गरेको छ । तर, सुरुमै आयोग देशमा ७७ जिल्ला हुने कि ७५ जिल्ला हुने भन्नेमा द्विविधामा परेकोे छ । क्षेत्र निर्धारणका लागि सुझाब लिन छलफलका लागि बोलाएका विज्ञहरूले नै चारथरी सुझाब दिएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा आयोग नै अलमलमा परेको हो ।
आयोग सदस्य माधव अधिकारीले भने आयोगको कार्यालय व्यवस्थापन भइनसकेकाले औपचारिक रूपमा काम आरम्भ नभएको बताए । ‘केही विज्ञहरूसँग अनौपचारिक छलफल त गरेका छौँ । निर्वाचन क्षेत्रको संख्या नभई नाम राख्ने भन्नेबारेमा विस्तारै छलफल होला, तर अहिले आयोगले अरूको सुझाब लिइरहेको छ, बोलेको छैन,’ अधिकारीले नयाँ पाित्रकासँग भने, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।